Data Behavioral Data: Ihe Nzuzo Kachasị Mma iji Kwụsị Chord Kwesịrị Ekwesị na Gen Z | Martech Zone
Ebumnuche azụmaahịa kachasị aga nke ọma na-eme ka nghọta miri emi nke ndị mmadụ ezubere iru. Na, ịtụle afọ bụ otu n'ime ndị na-ahụkarị ọdịiche nke omume na akparamàgwà, ịlele site na oghere ọgbọ abụrụla ụzọ bara uru maka ndị ahịa iji gosipụta mmetụta ọmịiko maka ndị na-ege ha ntị.
Taa, ndị na-eme mkpebi ụlọ ọrụ na-atụgharị uche na-elekwasị anya na Gen Z, amụrụ mgbe 1996 gasịrị, ma ọ bụ nke ziri ezi. Ọgbọ a ga-akpụpụta ọdịnihu ma e me atụmatụ na ha nwere ihe niile $ 143 ijeri na emefu ike. Agbanyeghị, ọnụọgụ a na-ahụtụbeghị mbụ nke nyocha na nke abụọ nke a na-eme na otu a apụtaghị na ọ ga-ezuru ya.
Ọ bụ ezie na a maara ya nke ọma na Gen Z na-anọchite anya ndị izizi mbụ nke dijitalụ, ụzọ dị iche iche e mere iji chọpụta mkpa ha na ebumnuche ha anaghị agwa anyị ezigbo ọrụ dijitalụ ha. Pomepụta atụmatụ ịzụ ahịa n'ọdịnihu nke ga-amalite ga-adabere kpamkpam na nghọta zuru oke banyere ndị a, nke na-ewebata ihe dị oke mkpa: Branddị kwesịrị ịgbasawanye echiche ha nke ụlọ ọmịiko maka ịkọwa maka akụkụ dijitalụ nke njirimara a.
Gen Z na Uru Uru
Anyị chere na anyị maara Gen Z. Na ha bụ ọgbọ kachasị dị iche iche. Na ha na-eme ngwa ngwa, nwee olile anya, nwee oke ochicho, ma bụrụ ndị gbasoro ọrụ. Na ha chọrọ udo na nnabata maka mmadụ niile, ma mee ka ụwa ka mma. Na ha nwere mmụọ achụmnta ego na enweghị mmasị itinye ha na igbe. Na, n'ezie, na a mụrụ ha na ama na aka ha. Ndepụta ahụ na-aga n'ihu, gụnyere akara a na-apụghị ịgbagha agbagha na ịbịaru afọ n'oge nsogbu COVID-19 ga-ahapụ ọgbọ a.
Otú ọ dị, ọkwa nghọta anyị dị ugbu a bụ naanị ịkọ ala maka isi ihe abụọ:
Kemgbe ụwa, nghọta na ọgbọ - na ọtụtụ ndị ahịa ndị ọzọ - a na-anakọtara nke ọma site na usoro atumatu na nzaghachi nyocha. Ọ bụ ezie na omume na mmetụta ekwupụtara bụ ntinye dị oke mkpa, ụmụ mmadụ na-agbasi mbọ ike icheta ihe ndị ha mere n'oge gara aga ma na-enweghị ike ịkọwapụta mmetụta ha mgbe niile.
Eziokwu nke okwu a bụ na Gen Z amaghịdị ndị ha ka bụ. Ihe omuma ha bu ihe ngbaghari dika ha no n'etiti uzo nke ndu ha. Omume ha banyere onwe ha ga-agbanwe n'oge na-adịghị anya-ọgbọ dị mkpa karịa ọgbọ ndị mere agadi.
Ọ bụrụ na anyị ele anya Narị Afọ Iri na otu anyị sirila merie ya na mbụ, ntụpọ dị n'ihe ọmụmụ na-eru nso ịmụ banyere ọgbọ dị iche iche pụtara ìhè. Cheta, na mbido aha ha dị ka ndị nwere ọrụ adịghị mma na enweghị ntụkwasị obi, nke anyị maara ugbu a na ọ bụghị eziokwu.
Igwu Ala na Omume Dijitalụ
Na -agbada Gen Z dị na nkwụsị nke dijitalụ na akparamàgwà. Na ekele maka ọganihu nke teknụzụ, maka oge mbụ kemgbe amụrụla ọgbọ, ndị na-ere ahịa nwere ohere ịnweta data omume bara ụba nke na-enye windo n'ime ọrụ ịntanetị n'ezie nke Gen Z na nkọwa zuru oke. Taa, ọtụtụ puku mmadụ 24/7 na-eme omume dijitalụ na-agabiga, ma na-ekwe ka ọ na-enyocha.
Data omume data dijitalụ, mgbe ejikọtara ya na offline na data ekwuru, na -emepụta foto zuru oke, ọwa obe nke ndị a gbasara ihe na ihe kpatara ya. Ma mgbe inwetara echiche a zuru oke, ị ga-enweta ọgụgụ isi n'ezie nke ị ga-esi nwee usoro ịre ahịa.
Ndị a bụ ụzọ ole na ole data omume omume dijitalụ nwere ike isi bulie nghọta na izi ezi nke amụma gbasara Gen Z-ma ọ bụ ngalaba ndị ahịa ọ bụla-n'agbanyeghị ụdị ihe ọmụma ị na-amalite.
Ezigbo ego: Nweta nghọta n'ime ndị na-ege ntị ị maghị ihe ọ bụla gbasara, ma chọpụta ma ị ga-enyochakwu ha. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịchọpụta ụdị ndị ebumnuche na akara. Inwere ike imuta otu ndi ahia si emegharia di na nwunye.
A ọhụrụ akụkụ: Tinye n'ígwé na-ege ntị na ị na-ama ihe, ma ezughị, banyere. Ọ bụrụ na ị nwere ngalaba dị mkpa na personas amalitelarị, ịmara ihe ha na-eme n'ịntanetị nwere ike kpughee ebe ohere adịghị.
Mmezi: Mepee ụzọ dị iche iche sitere na azịza ndị e kwuru — dị mkpa n'okwu ndị mmadụ n'otu n'otu na-echetaghị nke ọma ihe ndị ha mere n'oge gara aga.
Mara nke ọma otu ndị na - eri ọkụ ga - esi tinye nnukwu ala dijitalụ dị ike, ọ kachasị ahịa ahịa dijitalụ. Ngosipụta na saịtị ndị gara aga, omume ọchụchọ, njiri ngwa, ịzụta akụkọ ihe mere eme, na ndị ọzọ nwere ike igosipụta onye mmadụ bụ, ihe gbasara ha, ihe ha na ya na mgba nwere, yana isi ihe omume na ndụ. N'ịbụ ndị nwere echiche a siri ike nke Gen Z na nuances ha niile, ndị na-ere ahịa nwere ike itinye nkwalite, zụta mgbasa ozi zaa, nụchaa ozi, na ịkwaa ọdịnaya-n'etiti ihe ndị ọzọ-jiri obi ike dị ukwuu.
Knowmara data a dị adị ma ghara ịgbanye ya bụ iji ụma họrọ ịghara ịghọta ndị na-azụ ahịa. Nke ahụ kwuru, ọ bụghị isi mmalite data omume dijitalụ ka e kere. Ihe kacha mma bụ:
Nbanye, nke pụtara na otu ndị otu sonyere na-ama ụma kwenyere ka a hụ omume ha, yana mgbanwe dị mma n'etiti onye nyocha na onye ahịa.
Longitudinal, n’ihe ndị ahụ a na-eme, a na-eme ihe ndị a na-eme n’elekere na ọtụtụ oge, bụ́ nke nwere ike ime ka anyị ghọta na iguzosi ike n’ihe ma ọ bụ enweghị ya tinyere ihe ndị ọzọ.
Ike, mejuputara otu agwa omume zuru oke iji weputa ihe nlere anya nke ndi oru ahia na ihe omuma zuru ezu maka ika gi.
Ngwaọrụ amaghị ihe, na-enye ike ileba anya na desktọọpụ na omume mkpanaka.
Ihe nlere kuki, nke pụtara na ọ bụghị ịdabere na kuki, nke ga-abụ ihe achọrọ n'ọdịnihu dị nso.
Ka Gen Z na-aga n'ihu, mmekọrịta ha na mpaghara dijitalụ ga-arụ ọrụ dị mkpa n'ịkụziri ndị na-ere ahịa otu esi esi eso ha, nweta ntụkwasị obi ha, na iwulite mmekọrịta na-adịgide adịgide. Brandsdị ndị kachasị mma ga-anabata ụdị data a dị ka akụkụ ọhụrụ nke asọmpi uru, ọ bụghị naanị na atụmatụ nkọ na-eche ihu Gen Z, mana ndị na-ege ntị ọ bụla.
Tags: nghọta ndị na-ege ntịdata omumekukiobe-ọwadata omume dijitalụgen zemana zọgbọdata alaMillennialsịpụ nandozi
Lisa Speck kwuru
Lisa Speck bụ onye nsụgharị nchịkọta nke ndị isi na Gongos, ụlọ ọrụ na-ahụ maka ndụmọdụ lekwasịrị anya na ịchụpụ ndị ahịa maka ụlọ ọrụ Fortune 500.